Yini Oyaziyo Nge-Amazing The Last Mercenary? - Ukuzijabulisa
Isifinyezo esifushane se-Movie I-Last Mercenary
Masibe Nolwazi Olufushane Mayelana Nokubuyekezwa Kwefilimu
Ingabe ufuna amamuvi wesenzo namahlaya? Bese usendaweni efanele. Uzoyithanda le ndatshana njengoba sizokhuluma ngomunye wamafilimu ama-French ahlekisayo we-action ahamba phambili I-Last Mercenary .
Uma usuyazi kakade incazelo ye-Mercenary, lokho kuhle, kodwa uma ungazi, ngizokutshela. I-Mercenary ngumuntu obeka imali ngaphambi kwezimiso zokuziphatha.
Ifilimu yayiqondiswe futhi yaboniswa nguDavid Charon Futhi yakhiqizwa ngabakwaNetflix ngomhlaka-23 Julayi 2021, Kanye nenkanyezi yefilimu. UJean-Claude Van Damme
Njengoba abantu kuyibo kuphela izilwane zomphakathi emhlabeni, futhi ziphila kulo mhlaba kuye ngomndeni nendawo esikuyo. Abantu bakulungele ukwenzela umndeni nabangane noma yini. Kule movie, sizobe sikhuluma ngendikimba efanayo. Kule movie, uzohlangana nobaba okwathi ngendodana yakhe, waphenduka i-mercenary futhi ophinde wabhekana nezinkinga eziningi ohambweni kuyo yonke imuvi.
Funda futhi:- SIZOYIBONA NINI I-JOHNNY DEPP FANTASTIC BEASTS 3?
Ifilimu ivula ngokwethulwa kowayengumenzeli okhethekile wezinkonzo eziyimfihlo waseFrance ogama lakhe lingu-La-Brum, owaguqulelwa ekubeni yi-mercenary. Ubuyele emthwalweni awunikwa eminyakeni engu-25 edlule njengoba indodana yakhe u-Archibald yasuswa.
Indodana u-Archibald yasatshiswa ngemuva kwesigameko sokuhlasela kwesixuku, okwadala udlame nokucekelwa phansi. Ngenxa yendodana yakhe, i-ejenti yaphinde yahlela ukubuyela embuthweni njenge-ejenti ekhethekile futhi kufanele ifinyelele othintana nabo abadala ayenabo ngesikhathi sokusebenza kwakhe.
Unqume ukujoyina umbutho nenqwaba yentsha enganaki evela kumaphrojekthi kanye nomphathi we-offbeat. Kodwa umsebenzi obaluleke kakhulu kayise kwakuwukwenza u-Archibald azi ukuthi i-ejenti ekhethekile inguyise hhayi kuphela i-ejenti ekhethekile eyasindisa ukuphila kwakhe.
Funda futhi:- UROBOCOP UBUYISA INDAWO | SAKAZA | USUKU LOKUKHULULA
Ifilimu ayinazo izilinganiso ezihamba phambili, kodwa izilinganiso ziyisilinganiso; ifilimu yakhululwa eFrance, azikho izibuyekezo eziningi esingazithola.
Uma sikhuluma ngezilinganiso ezivela kwamanye amasayithi e-aggregator yokubuyekeza, kungu-50% kokungu-100 okusha kutamatisi obolile kodwa ngamavoti angu-16 kuphela futhi ilinganiselwe ngesilinganiso samaphuzu angu-5.3 kwangu-10.
I-IMDb iphinde yakala ifilimu ngamaphuzu angu-5.3 kwangu-10, asekelwe ekubuyekezweni kwababukeli abangu-45000 abagxekayo. Futhi, i-Metacritic inikeze amaphuzu angama-43% emuvi.
Ngakho-ke, ngemva kokufunda itulo, ngicabanga ukuthi wenze umbono ongacacile mayelana nefilimu, kodwa uma ucabanga ukuthi uzohlangabezana nesenzo se-ejenti kuphela, khona-ke unephutha, uzozuza izindinganiso eziningi zokuziphatha, futhi. uzomangala uma usubuka uthando lukababa olungenambandela endodaneni yakhe engazi nokuthi ubani uyise.
Ngethemba ukuthi usithandile isakhiwo. Lesi sihloko sasiwumbono kafushane nje wefilimu; Ngingakuqinisekisa ukuthi ngeke uzisole ngemva kokubuka ifilimu. Uma ungumuntu othanda amamuvi noma uthanda ukuzijabulisa ngesikhathi sakho sokuphumula, ngingancoma ukuthi ubukele imuvi kanye.
Uma wawuthanda isihloko sethu, siyaqiniseka ukuthi uzozithanda nezinye izihloko zethu. Yiya kuwebhusayithi yethu, futhi uzothola amathani ezindatshana ezithakazelisayo neziwusizo ezizokusiza ngokuqinisekile. Futhi, beka imibono yakho ngezansi. Sizama ukusebenzisa iziphakamiso zakho futhi siphendule ngamunye wenu. Sizoqhamuka nezihloko ezimangalisayo. Kuze kube yileso sikhathi, GoodBye.
I-Batgirl: Iqhawe Labesifazane Elinamandla Lesizukulwane Esisha